Bhukha iphakheji yakho yohambo olumiselweyo kwi-Award Winning Tour Operator kwi-Odisha | Ucingo @ + 91-993.702.7574
Namaskaar!... kunye nezibingelelo ezivela ezweni leNkosi uJagannath. IBhubaneswar - isixeko seetempileni; yintloko Odisha yindawo yam. I-Odisha, eyongezwa ngelifa lemveli, ifa lezakhiwo kunye neengcambu ezifihliweyo zenzeka ukuba yimoya yaseIndiya. Iitempile ezihle, iimpawu eziphawulekayo, iziqithiso ezinqabileyo, ezixhamlayo zendalo zasendle kunye neepaki zelizwe, izidalwa ezinamahlumela ezifudukayo echibini laseCchilika zidibanisa kwiindwendwe ezininzi. Ndandifuna ukucacisa lo mhle kwihlabathi lonke, kwaye sinye yeyona ndlela ihamba phambili ye-Award Winning Tour Operator kwi-Odisha enkonzweni yakho.
Ndandibonakaliswe ngokubanzi ukusuka ebuntwaneni bam neengxaki. Oku kwashukumisela ukuba ndiphuhlise eli shishini kwaye ndiphande ukuphumelela kwezinga elipheleleyo elingakhuthaza ngokwenene ikhefu okanye ukuhlanganiswa kweendwendwe. Kwaye sinokuziphakamisa ukuba, kwiminyaka embalwa, kunye nemigudu emininzi kunye nokusebenza kanzima ngoku siyiNkampani yokuThunywa kweThutho kwi-Odisha. Leyo yindlela endiyifumana ngayo "I-Child Child Dream", i-Pbt Ltd i-Pvt Ltd. abasebenzi abanolwazi oluya kuhamba ngaphaya koxanduva lwabo ukuba banike iindwendwe zethu ngeyona ndlela efanelekileyo yokuhamba ngamava.
Namhlanje sisasaze amaphiko ethu ukuya eNew Delhi naseKolkata kwaye sisebenza kwiimitha ezihlukeneyo zaseIndiya ngokuzithandela ngeSebe lezoKhenketho, uRhulumente we-Odisha kunye noRhulumente waseIndiya. Ukuba ngumqhubi weThumo lokuThunywa kweThutho eOdisha, isiqubulo sethu esiyinhloko kukunika abahambi ithuba lokuphila, ibhokisi egcwele iinkumbulo kunye nobuso obonwabileyo.
Ngaloo nto, ndingathanda ukwandisa ngokufudumeleyo wonke umntu ukutyelela isizwe sethu esimangalisayo nesithandekayo kwaye sihlangabezane nokugqwesa kwayo. Ndikulindeleke kwam ukuba iindwendwe ziza kuzama ukucubungula uphando lwezinto kunye neflora yezilwanyana zaseIndiya. Ndingathanda ukukuqinisekisa ukuba amava ayo aya kuhlala ekhunjulwa kwixesha elikhunjulwayo.
Yonke into enhle kubo bonke kwaye ulindele ukukwamukela kwi-Odisha.
MD, i-Sand Pebbles Tours